တရုတ်လျင်မြန်စွာတင်းကျပ် Flex ကို Pcb စီးပွားရေးထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Fastline
ကျနော်တို့ထက်ပိုမို 10 နှစ် PCB နှင့် PCBA စက်မှုလုပ်ငန်းအာရုံစိုက်နှင့်အဓိကအားဖြင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စျေးကွက်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်အဖြစ်မြောက်ဘက်နှင့်တောင်အမေရိကနှင့်အရှေ့တောင်အာရှစျေးကွက်နေကြသည်။ ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာစျေးကွက်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုအရည်အသွေးကိုထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ကူညီဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
၏ 1.Introduction quick တင်းကျပ် Flex ကို Pcb စီးပွားရေး
စံ Flex ကိုပစ္စည်းများ :
Polyimide (Kapton)5mils (.012mm - .127mm) မှ 0.5 Mil
5 mils မှ Adhesiveless ကြေးနီဝတ်အခြေစိုက်ပစ္စည်း 1 Mil
Flame ဟာနှောင့်နှေးလမိုင်း, အခြေစိုက်ပစ္စည်းနှင့် Coverlay
အမြင့်စွမ်းဆောင်ရည် Epoxy လမိုင်းနှင့် Prepreg
အမြင့်စွမ်းဆောင်ရည် Polyimide လမိုင်းနှင့် Prepreg
ul နှင့် RoHS တောငျးဆိုခကျြအပျေါ compliant ပစ္စည်း
အမြင့် TG FR4 (170+ TG), Polyimide (260+ TG)
1/3 အောင်စ။ - ။ .00047 အတွက် (.012mm) -rarely အသုံးပြုသော
1/2 အောင်စ။ ။ - (.018mm) တွင် .0007
1 အောင်စ။ ။ - (.036mm) တွင် .0014
2 အောင်စ။ - ခုနှစ် .0028 (.071mm) ။
Polyimide Coverlay:5mils Kapton (.012mm - .127mm) မှ 0.5 Mil
- 0.5 မှ2Mil ကော် (.051mm .012mm) နဲ့
LPI နဲ့ LDI Flexible Soldermasks
Flex ကို PCB Capability
Fastline Circuits Co. , လီမိတက်
ပစ္စည်း FR4, Polyimide / polyester
ရေတွက် Flex ကို: 1 ~ 8L; တင်းကျပ်-Flex ကို:2~ 8L
ဘုတ်အဖွဲ့အထူ Min.0.05mm; မက်စ်။ 0.3mm
ကြေးနီထူ 1/3 အောင်စ -2အောင်စ
CNC လေ့ကျင့်ခန်း Size ကို (မက်စ်) 6.5mm
CNC လေ့ကျင့်ခန်း Size ကို (အောင်မင်း) Flex ကို: 0.15mm
တွင်းတည်နေရာစာနာထောက်ထားရေး ± 0.05mm
Coverlay လေ့ကျင့်ခန်း Size ကို (အောင်မင်း) 0.6mm
Windows ကို (အောင်မင်း) ဖွင့်လှစ် Coverlay မှအပေါက် 0.15mm
min လိုင်းအကျယ် / Spacing 0.1 / 0.1mm
Hole အမှတ်တရအပေါ်ကြေးနီထူ Flex ကို: 12-22μm
min Pad Size ကို φ0.2mm
စာနာထောက်ထားရေးစွဲ 20% ±ပြီးဆုံးလိုင်းအကျယ်သည်းခံစိတ်
pattern မှတ်ပုံတင်ခြင်းစာနာထောက်ထားရေး ± 0.1mm (အလုပ်အဖွဲ့ Panel ကို Size: 250 * 300mm)
Coverlay မှတ်ပုံတင်ခြင်းစာနာထောက်ထားရေး ± 0.15mm
ဂဟေဆက်မျက်နှာဖုံးမှတ်ပုံတင်ခြင်းစာနာထောက်ထားရေး ± 0.2mm
PAD မှဂဟေဆက်မျက်နှာဖုံး non photosensitive: 0.2mm
min ။ ဂဟေဆက်ဆည် Mask 0.1mm
Misregistration စာနာထောက်ထားရေး ± 0.30mm
မာကြော, ကော်, ကော်စက္ကူများအတွက်
Surface က Finish ကို နီ / au Plating; ဓာတုနီ / au; OSP
လျင်မြန်စွာတင်းကျပ် Flex ကို Pcb စီးပွားရေး 2.Production အသေးစိတ်
3. ဏလျှောက်လွှာ ,fquick တင်းကျပ် Flex ကို Pcb စီးပွားရေး
4. အရည်အချင်း quick တင်းကျပ် Flex ကို Pcb စီးပွားရေး
custom တင်းကျပ်-Flex ကို PCB
HDI တင်းကျပ် Flexible PCB
Hdl တင်းကျပ်-Flex ကို PCB
oem တင်းကျပ် Flexible PCB
PCB တင်းကျပ် Flexible
quick တင်းကျပ် Flex ကို PCB
တင်းကျပ်ပြီးတော့ Flex ကို PCB
တင်းကျပ် Flex ကို Circuits
တင်းကျပ် Flex ကို PCB ဒီဇိုင်း
တင်းကျပ်-Flex ကို PCB ဘုတ်အဖွဲ့
အသေးစား PCB ထည် High Quality ထည် ...
တင်းကျပ် Pcb အမိန့်တရုတ် High Quality ထည် ...
micro တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့တင်းကျပ် Flex ကို Circuits
PCB ရှန်ကျန်း High Quality ထည်တင်းကျပ် Fle ...
တင်းကျပ်-Flexible PCB, Customized Rigid-Flex PCB, ရော်ဂျာ PCB, တင်းကျပ်-Flex ကို PCB ဘုတ်အဖွဲ့, တင်းကျပ် Flex ကို PCB, Fr4 Flex ကို PCB,